Ginea Ekoatôrialy - Wikipedia
Sainam-pirenen' i Ginea Ekoatôrialy
Mari-piandrianan' i Ginea Ekoatôrialy
I Ginea Ekoatôrialy ao Afrika
I Ginea Ekoatôrialy dia firenena ao Afrika Afovoany, ao amin' ny Helodranon' i Ginea, ao amin' ny Ranomasimbe Atlantika, manana velarana mirefy 28 051 km². Nisy mponina miisa 1 403 000 tao tamin' ny taona 2020. I Malabo ao amin' ny nosy Bioko no renivohiny. Nahazo ny fahaleovan-tenany tamin' ny taona 1968 ity firenena ity. Ny tapak' i Ginea Ekoatôrialy iray dia ao amin' ny tanibe (i Mbini) fa ny tapany iray hafa dia nosy (i Bioko). Mamaritra an' i Mbini ao avaratra i Kamerona, ao atsinanana sy ao tsimo i Gabôna. Fitambarana lembalemba rakotra ala i Mbini, fa i Bioko kosa dia nosin' afotroa izay manana tampona mirefy 3 008 m ambonin' ny ranomasina.
Atao hoe Ekoatôgineana ny vahoaka ao. Maro ny vondrom-poko mamorona ny vahoaka ao Ginea Ekoatôrialy, ka anisan' izany ny Boby (Bubi) miteny banto sady monina ao amin' ny nosy Bioko, ny Fernandinô izay safiotra afrikana-eorôpeana, ny Ibô izay vahoaka avy any Nizeria ary ny Fanga izay monina ao amin' ny ampahany an-tanibe amin' io firenena io. Kristiana ny ankamaroan' ny mponina ao Ginea Ekoatôrialy (93 % ka Katôlika ny 80 %).
Miompana amn' ny fambolena ny toekaren' i Ginea Ekoatôrialy, ka anisan' ny volena sy aondrana ny kakaô sy ny kafe. Manondrana hazo any ivelany koa io firenena io.
Na dia ny fiteny fanga aza no fitenin' ny maro an' isa amin' ny vahoaka ekoatôgineana dia ny fiteny espaniôla no fiteny ôfisialin' i Ginea Ekoatôrialy. Efa fiteny ôfisialy koa ny fiteny frantsay (taona 1998) sy pôrtogey (taona 2011).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ginea_Ekoatôrialy&oldid=1040795"
Voaova farany tamin'ny 3 Desambra 2021 amin'ny 15:10 ity pejy ity.